China Electrical Cross Arm Manufacture and Factory | XY Tower
Herin'ny lakroa elektrika
SIZE: Ll63 * 63 * 6-L90 * 90 * 8
Araka ny fampiharana, ny sandry hazo fijaliana elektrika dia antsoina koa hoe tsato-kazo fiampitana, sandry hazo fijaliana, sandry hazo fijaliana an-tariby, sandry hazo fijaliana na hazo fijaliana raha fohy. Ao amin'ny fametrahana rindrambaiko samy hafa dia misy configurations samihafa ho an'ny sandry hazo fijaliana elektrika. Ohatra, ny sandry hazo fijaliana dia mifamatotra amin'ny insulator pin amin'ny alàlan'ny insulator pin, ary ny insulator dia mifandray amin'ny tariby mba hahatsapa ny famoahana herinaratra. Ny sandry hazo fijaliana dia ampiasaina eo amin'ny tsato-kazo ho fanohanana ny herin'ny jiro.
Ny sandry hazo fijaliana dia mifamatotra amin'ny tsato-kazo amin'ny bolt arming, bolt pigtail, na U bolt. Misy braces hazo fijaliana hanohanana ny sandry hazo fijaliana mba tsy hianjera ilay tsipika.
Ny dingana lehibe indrindra amin'ny fanaovana ny sandry hazo fijaliana dia manindry. Ny lavaka rehetra dia voatsindry anaty hetsika iray nefa tsy misy burrs eo amboniny. Misy lavaka eo amin'ny crossarm, ny lavaka dia ampifandraisina amin'ny fampitaovana fitaovana andalana tsanganana hafa.
Ny lavaka mifanandrify rehetra amin'ny bolt dia mifanaraka amin'ny tsirairay ka ny refy 2 mm kely kokoa ny savaivony noho ny savaivon'ny bolt dia handalo malalaka amin'ny alàlan'ny fantsom-pifamoivoizana andry tsanganana miaraka amin'ny zoro mahitsy ho an'ireo mpikambana ireo.
Mba hitazomana ny haben'ny lavaka crossarm dia mampiasa milina mandeha ho azy ny ekipa Jingyoung. Ny milina mandeha ho azy dia manafoana ny fotoana famokarana ary mamonjy ny vidin'ny asa. Amin'izany fomba izany, Jingyoung dia mahazo tamberina tonga lafatra avy amin'ny mpanjifa.
Ny ekipa XY Tower dia tena henjana amin'ny fisafidianana akora matanjaka, ho an'ny sandry hazo fijaliana herinaratra, XY Tower dia tsy mampiasa fitaovana namboarina. Amin'ny maha mpanamboatra sandry hazo fijaliana tompon'andraikitra azy, ny ekipa XY Tower dia hiezaka araka izay tratry ny heriny mba hanombohana ny orinasanao. Tongasoa eto handefasana fanadihadiana aminay izao.
Previous: tilikambo fiambenana
Manaraka: firafitry ny substation